Christophe Haja : Nodimandry omaly maraina -
AccueilSongandinaChristophe Haja : Nodimandry omaly maraina
Christophe Haja : Nodimandry omaly maraina
Nodimandry teo amin’ ny faha- 44 taonany ny namana mpanao gazety Christophe Haja, ary namela mananontena iray sy roalahy ho kamboty. Mpanao gazety tao amin’ ny Radio Tana ny namana Christophe Haja, ary ny fitantarana baolina no isan’ny nahalalan’ny maro azy. Fantatra fa taorian’ny aretina nahazo azy , izay nitsaboana azy nandritra ny roa andro no nitarika ny fahafatesany. 25 taona nanaovana gazety ny namana Christophe Haja izao nindaosin’ny fahafatesana izao, ary efa nandalo dingana maro tao anatin’izany sehatra izany. Isan’ny nahafantaran’ny maro azy, ny fomba fiteny hoe “Namana”. Nanombohan’ i Christophe Haja ny asa fanaovan-gazety tao amin’ny onjam-peon’ny Antsiva, notohizany izany tao amin’ny radio Tana ny taona 2006 . Ankoatra izay dia mpikambana feno tao anatin’ny fikambanana AJSM, na ny “ Association des journalistes sportifs de Madagascar” i Christophe Haja. Miara-dalana amin’ ny asa fanaovan-gazety ny baolina kitra ho an’i Christophe Haja. Anton’ny nananganan’izy ireo ny JTM @ FO, na ny journaliste sy teknisianina milalao foot-ball.
Isan’ny nahafantaran’ny rehetra an’i Christophe Haja ny fahatsoram-pony, sy ny hanihaniny. Ho an’ ireo olona nifandray akaiky taminy, tahaka an’i Andry Rakoto izay naira-niasa taminy nandritra ny taona maro, dia nambarany fa “olona mananatra sy manoro i Christophe Haja, amiko izy tena zoky be ary tena zoky be”. Tahaka izany ihany koa no nambaran’i Hajatiana Randriamisaina, izay mpanao gazety ao amin’ny onjam-peon’ny Antsiva “olona tsotra raha i Christophe Haja, ary manoro hatrany raha asa fanaovan-gazety no resahina”. Isan’ny nitondra sy nitarika ny fampahalalam-baovaon’ny onjam-peo iasan’i Christophe Haja i Heritiana Ny Anjarason, izay talen’ny famoahana “nifankafantatra nandritra ny 16 taona izahay sy Christophe haja, ary nifandray am-po. Raha misymarary ny iray dia mifanantona sy mifanampy, olona azo atokisana sy tso-po raha i Christophe Haja”. Marihina fa mitazona ny andraikitry ny tonian’ny fanoratan’ny onjam-peo hiasany i Christophe Haja, amin’ izao izy nindaosin’ny fahafatesana izao. Ny gazety TRIATRA sy ny vondrona RLM Communication, dia mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany manontolo.